ကျနော့် ရဲ့ ပျား ဘုရင်မလေး – Hlataw.com
ဦးကျော်ခေါင် သီတာဆွေခေါင်း ကို ထပ်ဖိချရန် ကြိုးစားပေမယ့် သီတာဆွေက သူ့အကြံကို သိနေသည့်အလား ပါးစပ်ထဲ မ၀င်နိုင်သေးသော အရင်းပိုင်းကို လက်ဖြင့် အရင်လှမ်းဆုပ်လိုက်သည်။ ဦးကျော်ခေါင်၏ အကြံ မအောင်မြင်လိုက်။ သို့သော် သူက ထပ်တွန့်တက်ပြီး သီတာဆွေကို လက်ဖယ်ဖို့ အမိန့်ပေးတာမျိုးတော့ မလုပ်တော့ပါ။ သီတာဆွေက အလိုက်တသိနှင့် ခေါင်းကို ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်ပြီး လီးကိုစတင်စုပ်ပေးနေလို့ ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် လီးအရင်းအား ကိုင်ထားသော လက်ကလဲ ဂွင်းတိုက်ပေးသလို လှုပ်ခါပေးသည်။ “အား … ရှီ .. ကောင်းလိုက်တာ … လုပ် လုပ် .. အဲဒီလိုမျိုး” သီတာဆွေ တခြားနေရာများတွင် ဘယ်လောက် အရည်အချင်း ရှိသည်တော့ မသိ။ လီးစုပ်သည့် နေရာတွင်တော့ တော်တော်ကြီး ကျွမ်းကျင်သည်ကို ဦးကျော်ခေါင် သတိထားမိသည်။ သူမ ချစ်သူဆိုသော ကိုဝင်းခိုင်ကို စုပ်ပေးနေကြ ဖြစ်ရမည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အခုတော့ သီတာဆွေ၏ ထိုကျွမ်းကျင်မှုက ဦးကျော်ခေါင်အတွက် ကောင်းကောင်းကြီး အလုပ်ဖြစ်စေနေသည်သာ။ ဦးကျော်ခေါင်၏ လက်က သီတာဆွေခေါင်းအား လှမ်းပြီး ထိန်းပေးထားစရာတောင် မလိုတော့ပေ။ မျက်နှာတစ်ဖက်ခြမ်း ၌ သိမ်းကာစုထားသော ဆံပင်ရှည်ရှည်များအား ကိုင်ပေးထားယုံသာ လိုအပ်သည်။
သီတာဆွေက သူမဖာသာ သူမ ခေါင်းကို နိမ့်လိုက် ကြွလိုက်နှင့် လီးကြီးအား ပါးစပ်ထဲ တိုးဝင်ပြန်ထွက်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရင်း ပါးကလေးများ ဖောင်းလာသည်အထိ အားတက်သရော စုပ်ပေးနေသည်။ လီးစုပ်သံ တပြွတ်ပြွတ်နှင့် ဦးကျော်ခေါင်၏ အသက်ပြင်းပြင်း ရှူသံ တရှူးရှူး တရှဲရှဲကသာ အခန်းထဲတွင် ကြီးစိုးထားသည်။ “ကောင်းတယ် .. သီတာ .. စုပ်စုပ် ..” လွတ်နေသာလက်တစ်ဖက်က နို့ကြီးတွေကို လှမ်း၍ဆွဲကာဆော့ရင်း ဦးကျော်ခေါင် ဖင်ကြီးကို လှုပ်ကာ သီတာဆွေ ပါးစပ်ကို စတင်၍ လိုးဆောင့်သည်။ တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်သို့ ခြေကုန်သုတ်၍ ပြေးတက်ရသလို ဦးကျော်ခေါင် အားကုန်ထုတ်သည်။ လီးတန် အရင်းပိုင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားသော သီတာဆွေ၏ လက်သည်သာ နှုတ်ခမ်းသားများနှင့် ဆီးစပ် မထိတွေ့ရအောင် တားဆီထားသည့် တစ်ခုတည်းသော အတားအဆီး ဖြစ်၏။ မဟုတ်လျှင် လီးကြီးတစ်ခုလုံး သီတာဆွေ ပါးစပ်ထဲ ၀င်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားမှာ သေချာလှသည်။ နောက်ထပ်ငါးမိနစ်ခန့် ကြာအောင် မာရသွန်ပြေးသလို တောက်လျှောက်ဆွဲပြီးနောက် ဦးကျော်ခေါင် လီးတလျှောက် ကျင်စိမ့်တက်လာသည်။ “ထွက် .. ထွက်တော့မယ် … သေချာ မျိုချ .. သီတာ .. အပြင်ကို တစ်စက်မှ မကျစေနဲ့ “ လက်နှစ်ဖက်စလုံးနှင့် သီတာဆွေ ခေါင်းအား ညှပ်ကိုင်လိုက်ပြီးနောက် ဦးကျော်ခေါင် ကျားရိုင်းတစ်ကောင်၏ အားမာန်ဖြင့် သီတာဆွေပါးစပ်ထဲသို့ လီးတန်အား ထိုးထည့်သည်။ အားပါလှသော ဆောင့်ချက်များကြောင့် သီတာဆွေ လက်သည်လည်း လီးတန်အရင်းအား ဖမ်းကိုင်ထားခြင်း မပြုနိုင်တော့။ တံတွေးရည်များဖြင့် ပေကျံစိုရွှဲနေသော လီးတစ်ချောင်းလုံး သူမပါးစပ်ထဲ တိုးဝင်ပြန်ထွက်ဖြစ်နေသည်။ “အား … ရှစ် .. ထွက် .. ထွက်ပြီ” ၀မ်းခေါင်းသံကြီးနှင့် ဦးကျော်ခေါင် အော်ညည်းပြီးနောက် သီတာဆွေခေါင်းအား သူ့ပေါင်ရင်းနှင့် ထိသည်အထိ ဖိကပ်ထားလိုက်သည်။ လည်ချောင်းဝကို ကျော်၍ ရောက်နေသော ဒစ်လုံးကြီးသည် အစွမ်းကုန် တင်းမာသွားပြီးနောက် သုတ်ရည်တွေ ဒလဟော ပန်းထွက်ကုန်သည်။ ဘာမှန်း မသိလိုက်ခင်မှာပင် အရည်ပျစ်ပျစ်တွေအား သီတာဆွေ မျိုချလိုက်ရရှာသည်။ ဦးကျော်ခေါင် ဖင်ကြီးတစ်ခုလုံး ဆတ်ခါဆတ်ခါ တုန်နေသည်။ ထို့အတူ သီတာဆွေ၏ လည်တိုင်သွယ်သွယ်လေးသည်လည်း
ဆတ်ခါဆတ်ခါ တုန်နေရှာသည်။ ဦးကျော်ခေါင် တစ်ချက်ကော့တိုင်း သီတာဆွေ တစ်ချက်မျိုချနေရတော့သည်။ “၀ိုး .. အန်ကယ် တကယ်ပဲ ဖိအားတွေများနေတာကိုး .. ဟူး” တစ်စက်မကျန် ကုန်သည်အထိ သုတ်ရည်များအား စုပ်ယူလိုက်ပြီးနောက် လီးကြီးအား ပါးစပ်ထဲမှ ထုတ်ပေးလိုက်ချိန်တွင် သီတာဆွေ အတော်လေးပင် မောဟိုက်နေရှာသည်။ သီတာဆွေ နည်းတူ ဦးကျော်ခေါင်သည်လည်း ဟောဟဲဟောဟဲ ဖြစ်နေသည်။သီတာဆွေ၏ မှတ်ချက်ကို ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ပဲ ယောင်ယောင်လေးပြုံး၍သာ ထောက်ခံသည့်အနေနှင့် ခေါင်းညိတ်ပြရှာသည်။ ဦးကျော်ခေါင်၏ အပြုံးမျက်နှာသည့် မည့်သည့်အဓိပ္ပါယ်ဆောင်သည်ကို သူသာလျှင် အသိဆုံးဖြစ်ပေတော့မည်။ထိုနေ့မှစ၍ နောက်ထပ်ရက်များတွင်တော့ ဦးကျော်ခေါင်တစ်ယောက် သူ့ပီအေဖြစ်သူ သီတာဆွေ၏ နောက်တိုးတာဝန် ဖြစ်သော လီးစုပ်ပေးခြင်းအမှုကို ကောင်းကောင်းအသုံးချလေတော့သည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလို အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် သုံးကြိမ်လောက်တော့ သီတာဆွေခမျာ သူ့လီးအား စုပ်ပေးရသည်။ ထိုသို့စုပ်ပေးရာတွင် တခါတလေတော့ ဦးကျော်ခေါင် ဘာမှဝင်ရောက်မစွက်ဖက်။ ထိုင်ခုံတွင် အခန့်သား ကျောဆန့်ကာထိုင်ရင်း ခြေတန်များကို ကားပေးထားလိုက်ယုံပင်။ သီတာဆွေသာလျှင် မာတောင်နေသည့် လီးကြီးကို ပါးစပ်ထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်ပြီး ကောင်းကောင်းကြီး စုပ်ပေးရရှာသည်။
သီတာဆွေ ပြုစုသမျှ ဦးကျော်ခေါင်က အလိုက်သင့် ခံစား၊ စံစားနေယုံသာ ..။သို့သော် တစ်ချို့သောအချိန်များတွင်မူ အရမ်းကိုဖိအားများသည်ဟူသော အကြောင်းပြချက်နှင့် သီတာဆွေအား အခန်းအလယ်တွင် ဒူးထောက်ထိုင်ခိုင်းပြီး၊ သူက လက်နှစ်ဖက်နှင့် သူမခေါင်းအား ညှပ်ထိန်းကိုင်ပြီး ပါးစပ်ပေါက်အား ကောင်းကောင်းလိုးတော့သည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့နှစ်ဦး၏ ဖိအားလျှော့ခြင်းကိစ္စသည် လီးထိပ်ဝမှ ပန်းထွက်လာသော သုတ်ရည်များကို သီတာဆွေ တစ်စက်မကျန် သောက်မျိုချရခြင်းနှင့်သာ အမြဲ ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ထိုအတွက် ဦးကျော်ခေါင်၏ အကြောင်းပြချက်ကတော့ ရုံးခန်းထဲတွင် ပေကျံခြင်း မဖြစ်အောင်ဆိုသော အချက်ပင်ဖြစ်တော့သည်။ အားလုံးကို ချုံငုံ၍ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ဦးကျော်ခေါင်အတွက် အကောင်းဆုံးသော အခြေအနေတစ်ခုကို လက်ဝယ်ပိုင်ပိုင် ရရှိထားသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ပါးရည်နပ်ရည်ရှိပြီး ဘ၀တလျှောက်လုံး လည်လျှင်လည်သလို စားသုံးလာခဲ့သည်မို့ ဒီမျှနှင့် သူ့ခမျာ မကျေနပ်နိုင်။ ဦးကျော်ခေါင်အတွက်တော့ မြက်ဆိုသည်မှာ တခြားဘက်တွင် ပိုစိမ်းသည်လို့ ခံယူထားသည်သာ။ ထို့အတွက်ကြောင့် သူလုံးဝ စိတ်ကျေနပ်သွားဖို့အတွက်ရန် သီတာဆွေအား ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လိုးရမလဲဆိုတာ အမြဲအာရုံရောက်နေသည်။ တစ်နည်းနည်းနှင့်တော့ သီတာဆွေ ပင်တီကို ချွတ်ပြစ်နိုင်အောင် သူကြိုးစားရမည်။ ဤသည်ကား ဦးကျော်ခေါင်အတွက် အဓိကပန်းတိုင်ပင် ..။ ထိုင်နေကြ ဆုံလည်ခုံပေါ်တွင် ကိုယ်ကိုခပ်လျော့လျော့ အနေအထားနှင့် ငြိမ်သက်စွာ ထိုင်နေရင်း ဦးကျော်ခေါင် သူ့ဦးနှောက်ကို အပြေးအလွှား အလုပ်ပေးမိသည်။
သီတာဆွေကို ဘယ်လိုလိုးရမလဲဆိုတာ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အသည်းအသန် စဉ်းစားနေရလို့လား မသိ။ သူ့ခေါင်းတွင် ဆံပင်ဖြူတွေပင် ထပ်တိုးလာသလို ခံစားရသည်။ ဟူး .. ကျော်ခေါင် .. မင်း ကြံစမ်း ပြီးခဲ့သော မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကပင် သီတာဆွေတစ်ယောက် သစ်သားစားပွဲကြီးအောက် ဒူးထောက်ကာ ၀င်ပြီး သူ့လီးအား တစ်ချီပြီးအောင် စုပ်ပေးခဲ့သေးသည်။ အခုတော့ ဦးကျော်ခေါင် နောက်ထပ် ထပ်လိုချင်နေသေးသည်။ တကယ်ကို ရလေလိုလေ အိုတစ္ဆေ အကြီးစားပင်။ (ကျော်ခေါင် .. ကျော်ခေါင် .. သိပ်လောဘမကြီးစမ်းနဲ့) ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ဆုံးမ ဖျောင်းဖျပြီး ဦးကျော်ခေါင် သက်ပြင်းချသည်။ တခြားလုပ်စရာလည်း လောလောဆယ် မရှိသဖြင့် ဘာရယ်မဟုတ်ဘဲ စားပွဲအံဆွဲကို လှမ်းဖွင့်သည်။ အထဲမှာ မြင်လိုက်ရသော ပါးစပ်အနံ့ပျောက်ဆေး (မင့်)ဗူးကို လှမ်းယူပြီး ဆေးလုံးဖြူဖြူလေးနှစ်ခုကို လက်ဝါးထဲ ခေါက်ချလိုက်သည်။ ပါးစပ်ထဲ ထည့်မယ်ဆိုပြီး လက်ကိုမြှောက်လိုက်ချိန်တွင် သူ့ခေါင်းထဲတွင် အကြံတစ်ခုက ဖြတ်ခနဲ ပေါ်လာတော့သည်။ ဦးကျော်ခေါင်၏ အကြံသစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့တော့ ရက်အနည်းငယ် စောင့်လိုက်ရသည်။ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း —- ကုမ္ပဏီက အလုပ်တော်တော်ဖြစ်ထွန်းသည်။ ထိုရောအခါ ဦးကျော်ခေါင်တစ်ယောက် ပို၍ဖိအားများသလို ခံစားရသည်။ ဦးကျော်ခေါင် ဖိအားများခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးတရားကား သီတာဆွေ တစ်ယောက် ပိုပို၍ သူ့လီးအား စုပ်ပေးလာရခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ပတ် ရုံးဖွင့်သည့် တနင်္လာနေ့မှ စ၍ သီတာဆွေ တစ်ယောက် သူမပါးစပ်ကို နားရသည်ဟူ၍ မရှိ။
သေချာသာ တွက်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် သီတာဆွေ တစ်ယောက် သူမအလုပ်ကို သူမလုပ်ရသည်ထက် ရုံးခန်းထဲတွင် ဦးကျော်ခေါင်လီးကို စုပ်ပေးရတာက ပိုများသည်ဟုတောင် ဆိုရမလား မသိ။ အခုလဲကြည့်။ မိနစ်နှစ်ဆယ် နီးပါးလောက် ကြာအောင် ဦးကျော်ခေါင်လီးအား သုတ်ရည်တွေ ပန်းထွက်သည်အထိ ရုံးခန်းထဲ စုပ်ပေးခဲ့တာမှ ဘယ်လောက်မှ မကြာသေး။ ဆယ်မိနစ်သာသာလောက်ပဲ ရှိဦးမလား မသိ။ ရုံးခန်းထဲမှ ဦးကျော်ခေါင်၏ “သီတာရေ အထဲ ၀င်ခဲ့ပါဦး”ဆိုသည့် အသံကြောင့် သီတာဆွေ စိတ်တွေ လေးလံသွားရရှာသည်။ သီတာဆွေသည် အပျော့သားထဘီစကတ် အနက်ရောင်ကို အဖြူရောင် ရုံးဝတ်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်တွဲ၍ ၀တ်ဆင်ထားသည်။ ထဘီစကတ်က ဘေးခွဲဖြစ်ပြီး လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း ဖြူဖွေးသွယ်တန်းသော ပေါင်တန်တစ်ဖက်အား ဒူးအထက်လောက်ထိ မြင်နေရသည်။ မိန်းမ၀တ်ရှပ်အင်္ကျီကမူ ကြယ်သီးတပ်ဖြစ်ပြီး မို့ဝန်းသောစနေနှစ်ခိုင်အား လုံလုံခြုံခြုံဖြစ်အောင် ဖုံးကွယ်ထားပေးသည်။ သီတာဆွေ၏ အတွေးက ဒီလိုမျိုး လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ထားလျှင် သူမအင်္ကျီထဲသို့ လက်နှိုက်ပြီး နို့တွေကို ဦးကျော်ခေါင် မသုံးနိုင်ဟူသော အတွေး။ သို့သော် ဦးကျော်ခေါင်က သူမပါးစပ်အား မလိုးခင်မှာ နို့တွေကို အင်္ကျီပေါ်ကနေ ကောင်းကောင်းကိုင်ပြီး ဆုပ်နယ်လိမ့်မည်ဆိုသော အချက်ကိုတော့ မေ့သွားခဲ့သည်။ မနက်ပိုင်း တစ်ဆက်ရှင်ပြီးလို့ သူမ ရုံးခန်းထဲမှ ပြန်ထွက်လာချိန်တွင် ခပ်ကြေကြေဖြစ်သွားသော အင်္ကျီရှေ့ပိုင်းကို မနည်းပင် ပြန့်အောင် ပြန်လုပ်ထားခဲ့ရသည်။ ငြင်းဆန်လို့ရမှာ မဟုတ်သည့်အလျောက် သီတာဆွေ စိတ်လျှော့ပြီး ရုံးခန်းထဲ ၀င်လာခဲ့သည်။ လမ်းလျှောက်လာရင်း မေးရိုးနှစ်ဖက်ကို လက်ဖြင့် စမ်းကြည့်သည်။
မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန့် နမ်းစတော့ ပလွေမှုတ်ပေးခဲ့ရသဖြင့် ပါးရိုးတွေက အတော်ညောင်းနေသည်။ ကြမ်းပြင်တွင် ဒူးထောက်ထိုင်ခဲ့ရသဖြင့်လည်း ဒူးခေါင်းနေရာက အနည်းငယ် နာနေသည်။ တတ်နိုင်လျှင် သီတာဆွေ ဒီလောက်မြန်မြန်ကြီး ဦးကျော်ခေါင် လီးအား စုပ်မပေးချင်တော့။ ဒီလိုနှုန်းထားအတိုင်းသာ ဆက်သွားမည်ဆိုလျှင် ဒီနေ့တော့ တစ်နေ့တာအတွက် အများဆုံး စံချိန်အဖြစ် တင်ထားခဲ့သော ခြောက်ကြိမ်ဆိုသည့် နှုန်းကို ကျိုးမည်လား မသိ။ သီတာဆွေ စံချိန် မကျိုးချင်ပါ။ “ဒီမှာ ထိုင်ဦး သီတာ ..” တော်သေးသည်။ ဒီတစ်ခါ ဦးကျော်ခေါင် ခေါ်တာ အလုပ်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ဟန်ရှိသည်။ စားပွဲရှေ့ က ထိုင်ခုံကို ညွှန်ပြပြီး ထိုင်ခိုင်းလို့ ဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ လီးစုပ်ပေးရမည်ဆိုလျှင် သူ့ရှေ့က ကြမ်းပြင်ကို ညွှန်ပြပြီး ဒူးထောက်ထိုင်ခိုင်းမှာ ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်လေတော့ သူမကို သစ်သားစားပွဲကြီးပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ် ပက်လက်လန်ကာ အိပ်ခိုင်းပြီး သူက စားပွဲဟိုဘက်စွန်းမှနေ၍ ပါးစပ်ကို သုံးလေ့ရှိသည်။ ဒါကလဲ တခါတလေမှ ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်တော့ သီတာဆွေ ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး စုပ်ပေးရတာက ပိုများလေသည်။
သီတာဆွေ ထိုင်ခုံမှ ၀င်ထိုင်လိုက်ပေမယ့် ဦးကျော်ခေါင်က စကားကို ချက်ချင်းစမပြောသေးပါ။ တစ်စုံတစ်ခုတွင် အတွေးနစ်နေဟန်ဖြင့် သေချာစဉ်းစားနေတာ တွေ့သည်။ ခနနေမှ .. “အင်း … သီတာရေ .. အန်ကယ်တော့ ဘယ်လိုပြောရမှန်း မသိဘူး” စိတ်သက်သာသလို ဖြစ်နေသည့် သီတာဆွေ အန်ကယ်ဦးကျော်ခေါင် စကားကြောင့် စိတ်ထဲမတည်မငြိမ် ဖြစ်လာသည်။ ဘာ .. ဘာများ ဖြစ်ပြန်တာပါလိမ့် …။ “ဟိုလေ .. ပြောရမှာ အားတော့နာတယ် … သီတာ ပါးစပ်က အနံ့အကြောင်း ပြောချင်တာ .. အဲ ဒါလေး ..” သီတာဆွေ မျက်တောင်လေးများ တဖျတ်ဖျတ် ခတ်သွားသည်။ “သီတာ့ ပါးစပ်က အနံ့ဟုတ်လား .. အန်ကယ် .. ဘာဖြစ်လို့လဲ” “ဟုတ်တယ် .. သီတာ .. ဘယ်လိုပြောရမလဲ .. သီတာပါးစပ်က စကားပြောလိုက်တိုင်း အနံ့တစ်မျိုး ရနေတယ်” ဦးကျော်ခေါင်က ထိုစကားကိုပြောရင်းနှင့် သူ့အဆိုကို အားဖြည့်ဟန် နှာခေါင်းဝကို လက်ချောင်းလေးများဖြင့် ပိတ်ပြသည်။ ဒီစကားနှင့် အမူအရာကြောင့် သီတာဆွေ မျက်နှာလေး ညိုသွားရှာသည်။ မသိမသာခေါင်းလေး ငုံ့ကျသွားပြီး ၀မ်းနည်းသည့်အသံနှင့် တုံ့ပြန်ပြောသည်။ “သီတာလဲ စိတ်မကောင်းဘူး .. နဲနဲတော့ သတိထားမိတယ် .. မနေ့ကညနေတုန်းကဆိုရင် သီတာ့ချစ်သူနဲ့တွေ့တော့ သူကတောင် ပြောသေးတယ် .. သီတာ့ပါးစပ်က အနံ့တစ်မျိုးရနေတယ်တဲ့” “ဟုတ်တယ် .. သီတာ .. ကြည့်ရတာ .. အန်ကယ့်အရည်တွေကို သီတာ အမြဲမျိုချနေရလို့ ဖြစ်မယ်” သီတာဆွေ ထိုစကားကို ခေါင်းညိတ်၍ ထောက်ခံလိုက်သည်။ ဒီအချက်ကြောင့် ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်သည်။
ဦးကျော်ခေါင် သူမပါးစပ်ကို ဖိအားလျှော့ဖို့ဆိုပြီး မသုံးခင်က ဒီလိုမျိုး အနံ့မရခဲ့ပါ။ ကိုဝင်းခိုင်ကလဲ သူမနှင့် နမ်းစုပ်တိုင်း ဘာကွန်ပလိန်းမှ မတတ်ခဲ့ပေ။ အခုကျမှ ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်မှန်း မသိ။ တကယ်တမ်းတော့ ဖိအားများသည်ဆိုသူက သူမ မဟုတ်။ ဦးကျော်ခေါင်သာလျှင်။ သူမက ပီအေတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကူညီခြင်းသာ။ အကယ်၍သာ ပါးစပ်ကို မသုံးဘဲ တခြားနည်းလမ်းနှင့် ဖြေရှင်းလို့ရမည်ဆိုလျှင် သူမ၀မ်းသာမိမှာ သေချာပါသည်။ သီတာဆွေ အတွေးထဲတွင် နှစ်မျောနေခိုက်တွင် ဦးကျော်ခေါင် ထိုင်နေရာမှထကာ သူမနားသို့ လျှောက်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သီတာဆွေ၏ နောက်ဘက်ရောက်လာပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ယှက်ကာဆန့်ထုတ်ရင်း သူမနို့တွေ့ကို လှမ်းကိုင်လိုက်သည်။ နောက်ကနေ သိုင်းဖက်ခြင်း ခံရသလိုမို့ သီတာဆွေ ကိုယ်ကလေးအနည်းငယ် တွန့်သွားသည်။ ဦးကျော်ခေါင်က သူမ နားနားကပ်၍ သူစဉ်းစားထားသည်ကို ဆက်ပြောပြန်သည်။ “သီတာ့ပါးစပ်ကို မသုံးဘဲ စထရပ်လျှော့တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုတော့ အန်ကယ်တို့တတွေ ရှာဖို့ လိုအပ်နေပြီ” “ဟုတ် .. ဟို .. ဟိုလေ .. သီတာ့လက်နဲ့ ပြန်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးရမလား အန်ကယ်” “မကောင်းဘူး .. သီတာ .. အဆင်မပြေဘူး .. အဲဒီနည်းက ပေတာကျံတာတွေ များတယ်” သီတာဆွေ အကြံပြုချက်ကို ကန့်ကွက်လိုက်ရင်း ဦးကျော်ခေါင် သူ့နှာဝသို့ ပြန့်နှံ့လာသော ကိုယ်သင်းနံ့နံ့လေးကို ခိုး၍ ရှုလိုက်မိသည်။ သီတာဆွေသည် ဥာဏ်ရည်ထိုင်းသလောက် သူမကိုယ်သူမတော့ ဘယ်လိုအလှပြင်ရမည်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းကြီး သိပေသည်။ ဆံကေသာအနံ့က သင်းသင်းလေးမွှေးနေသလို၊ ကိုယ်သင်းနံ့ကလဲ ယဉ်ယဉ်လေးနှင့် ဆွဲဆောင်နေသည်။
အနီးကပ် နောက်ဘက်မှ မြင်နေရသော ပါးပြင်ဖွေးဖွေးလေးကို မနမ်းရှိုက်မိအောင် ဦးကျော်ခေါင် မနည်းကို စိတ်ထိန်းထားရသည်။ ရမ္မက်ဇော၏ ထွက်ပေါက်အဖြစ် လောလောဆယ် သုံးလို့ရနေသော နို့လုံးအိအိတွေကိုသာ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ခပ်တင်းတင်း ညှစ်ကာဆော့ပစ်လိုက်သည်။ “အန်ကယ်တစ်ခု စဉ်းစားမိတာတော့ ရှိတယ် .. သီတာ လက်ခံမလား မသိဘူး” “ဟုတ် .. ဘာများလဲ အန်ကယ် ပြောပါဦး” “ဒီလိုလေ .. အန်ကယ်တို့ ပါးစပ်အစား နောက်ထပ်အပေါက်တစ်ပေါက်ကို ပြောင်းသုံးရင် ကောင်းမယ်” “နောက်ထပ်အပေါက် ??” ဦးကျော်ခေါင်၏ စကားအား နားမရှင်းမှုကြောင့် သီတာဆွေ သူမခေါင်းလေးကို လည်ပြန်လှည့်ရင်း မေးသည်။ နို့တွေအား ဆုပ်နယ်နေသည့် လက်ကို လွှတ်လိုက်ပြီး ဦးကျော်ခေါင် သီတာဆွေရှေ့က စားပွဲပေါ်တွင် တစောင်းဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ စိတ်အားထက်သန်သည့် အမူအရာနှင့် သီတာဆွေအား အပေါ်စီးမှ ငုံ့ကြည့်ရင်း သူ့စကားကို ဆက်သည်။ “ဟုတ်တယ် .. ပါးစပ်မဟုတ်တဲ့ အပေါက် .. စောက်ဖုတ်အပေါက် .. ဒါမှမဟုတ် စအိုအပေါက်” “စအိုအပေါက် … အာ .. မဟုတ်တာ!!” စအိုပေါက်ဆိုသည့် စကားတွင် သီတာဆွေ ရွံရှာဟန်နှင့် မျက်နှာလေးမဲ့သွားသည်။ ဟုတ်သည်။ သူမချစ်သူ ကိုဝင်းခိုင်နှင့်တောင် တစ်ခါမှ စအိုပေါက်ကို အသုံးပြုတာ ခံဖူးခဲ့သည် မဟုတ်။ စအိုပေါက်ဆိုသော စကားကြောင့် သီတာဆွေ မျက်နှာလေးပျက်သွားသည်ကို လူလည်ကြီး ဦးကျော်ခေါင် ဒက်ခနဲ ရိပ်မိသည်။
“အင်း .. စအိုပေါက်တော့ မသုံးတာ ကောင်းပါတယ်” ဦးကျော်ခေါင် နှုတ်က ထိုစကားကြောင့် မတည်ငြိမ်ဖြစ်နေသော သီတာဆွေ စိတ်အေးချမ်းသွားရသည်။ ယောင်ယမ်းပြီး ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်သည်တွင် ဦးကျော်ခေါင်က ကျေနပ်အားရဟန်နှင့် လက်ခုတ်တစ်ချက်တီးသည်။ “ကောင်းပြီ .. ဒါဆိုအဆင်ပြေသွားပြီ” “ဟုတ်လား .. အန်ကယ် .. အဆင်ပြေသွားပြီ??” (ဘာကြောင့် ဦးကျော်ခေါင် ၀မ်းသာသွားသည်ကို စဉ်းစားမရဟန်ဖြင့် သီတာဆွေ မေးမိသည်) “ဟုတ်တယ် .. ဒီလိုလုပ်မယ်လေ” စားပွဲပေါ်တွင် ထိုင်နေရာမှ ဦးကျော်ခေါင် ခုန်ဆင်းလိုက်ပြီး သီတာဆွေအားလဲ ထိုင်ခုံမှထအောင် လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆွဲထူလိုက်သည်။ အူကြောင်ကြောင်နှင့် သီတာဆွေ မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်တွင် သူမကိုယ်လေးကို စားပွဲဘက်သို့ တွန်းပို့တာ ခံလိုက်ရသည်။ သီတာဆွေ လက်နှစ်ဖက်က စားပွဲမျက်နှာပြင် ထောက်မိသွားသည်။ “အန်ကယ် .. ဘာလုပ်မလို့လဲ??” ဘာမှန်းညာမှန်း မသိဘဲ စားပွဲဆီသို့ တွန်းပို့ခြင်း ခံလိုက်ရသဖြင့် သီတာဆွေ ကမန်းကတမ်း လှမ်းမေးလိုက်စဉ်တွင် ဦးကျော်ခေါင်က သူမတင်ပါးနောက်တွင် ကပ်ကာ နေရာယူလိုက်သည်။ မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ် ဖြစ်နေသော သီတာဆွေအား ပါးစပ် နားရွက်တက်ချိတ် လောက်မတတ် ပြုံးပြလိုက်ရင်း ဖြေလိုက်သည်က .. အန်ကယ် သီတာ အဖုတ်ကို သုံးမလို့ … ဟု ဖြစ်တော့သည်။ “ဟင်!!” သီတာဆွေ ထံမှ ဟင်ဆိုသော အသံမှမဆုံးသေး။ ဦးကျော်ခေါင်က သူမကျောကို လက်နှင့်ဖိချလိုက်ရာ စားပွဲအစွန်တွင် ကုန်ပေးထားသော ပုံစံ အလိုလို ရောက်သွားသည်။ ဦးကျော်ခေါင်က နောက်မှ ကပ်၍ ရပ်နေသည်ဖြစ်ရာ ကော့တင်းတက်လာသော သီတာဆွေ ဖင်လုံးကြီးနှစ်ခုနှင့် သူ့ဆီးစပ် ပြေးအပ်မိသည်။ ပုဆိုးအောက်မှ မာတင်းစပြုလာသော လီးကြီးက ဖင်ကြားကို တည့်တည့်ထောက်သည်။
သီတာဆွေ ယောင်ပြီး တင်ပါးတွေ လှုပ်ခါမိသည်။ “သီတာပဲ ပြောတာလေ .. ဖင်ပေါက်ကိုတော့ မသုံးချင်ဘူးဆိုတာ .. အဲဒါကြောင့်ပါ” “အော် .. အင်း” (သူပြောတာ ဟုတ်ရှာသားဟု သီတာဆွေ အတွေးရောက်သည်) ဘာပြီးလျှင်ဘာလုပ်ရမည်ဆိုတာ သိနေသူ ဦးကျော်ခေါင်ကတော့ လက်သွက်လှသည်။ စကတ်ထဘီ၏ ဘေးချိတ်နေရာကို လက်နှင့်စမ်းပြီး ဆွဲဖွင့်လိုက်သည်။ ထဘီစက ခါးနေရာမှ ကွာသွားပြီး အောက်ခံပင်တီ အ၀ါရောင်လေးကို လှမ်းမြင်လိုက်ရသည်။ စွင့်ကားလှသော တင်အိုးတွေက တောင့်ခံထားသဖြင့် ထဘီက အောက်ကိုတော့ လျှောကျမသွား။ ဦးကျော်ခေါင်ပင် လက်နှင့်ဟိုဘက်ဒီဘက် ထိန်းကိုင်ပြီး တင်ပါးတွေကို ကျော်အောင် လိပ်ချလိုက်သည်။ ပျော့ပြောင်းသည့် ထဘီအနက်လေး ခြေရင်းမှာ ပုံသွားချေပြီ။ “အားပါးပါး .. တောက်!!” ဇာပင်တီပါးလေးနှင့် မလုံ့တလုံထုပ်ထားရှာသော တင်အိုးတွေက ပြည့်တင်းတောင့်တင်းလှသည်။ ကားစွင့်ဝိုင်းစက်ကာလဲ ရှိနေသည်။ တော်သေးသည်။ ဦးကျော်ခေါင် အခုအသက်အရွယ်ထိ ရောဂါရယ်လို့ မယ်မယ်ရရ မရှိလို့။ မဟုတ်လျှင် နေရာတွင် နှလုံးရပ်ပြီး ကိစ္စချောသွားနိုင်သည်။ မျက်လုံးရော၊ နှာခေါင်းပါ အပူရှိန်တွေ တမဟုတ်ခြင်း ပြင်းလာသည်မို့ ဦးကျော်ခေါင် ပင်တီကို ချွတ်ဖယ်ဖို့ပင် စိတ်မကူးနိုင်တော့။ ပင်တီစတစ်ဖက်ကို တင်းတင်းဆွဲဖယ်လိုက်ပြီး ဖင်သားတစ်ခြမ်းဖက်ပေါ်သို့ လှမ်းတင်သည်။ — ကုမ္ပဏီကို စရောက်ခါစကတည်းက အမြဲတမ်း စိတ်ကူးယဉ်တောင့်တ နေခဲ့ရသော သီတာဆွေ၏ အဖုတ်က ကုန်းပေးထားသဖြင့် ဖင်ကြားကနေ ပြူးခနဲ ထွက်လာသည်။ “ရွှီ ..” ဒီတစ်ခါတော့ ၀မ်းသာမှုကို ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်သည်မို့ ဦးကျော်ခေါင် လေချွန်ဖြစ်အောင် ချွန်ဖြစ်သွားသည်။ လေချွန်သံကြားတော့ သီတာဆွေသည် စားပွဲပေါ်လက်ထောက် ကုန်းထားရာမှ သူ့ကို နောက်လှည့်ကြည့်သည်။
“အန် .. အန်ကယ် .. ဒီဟာက ဖိအားလျှော့တာဟုတ် .. တခြားဘာမှ မဟုတ်ဘူးနော် ..” “ဟုတ်တယ် .. ဟုတ်တယ် .. ဖိအားလျှော့တာ” ကမူးရှူးထိုး ပြန်ဖြေလိုက်ပြီးနောက် ဦးကျော်ခေါင် ပုဆိုးကိုဖြေချလိုက်သည်။ ပေါင်ကြားရှိ လီးကြီးကတော့ နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နှင့်လွယ်ရတော့မည်ကို သိနေသည်အလား ခေါင်းထောင်စပြုနေပြီ။ ညာဘက်လက်နှင့် လီးကို အရင်းမှလှမ်းကိုင်လိုက်ပြီးနောက် အပြူးသားထွက်စပြုနေသော စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးဆီသို့ ထိပ်ကို ပြေးကပ်သည်။ သီတာဆွေနှုတ်မှ အင်းခနဲ ညည်းသံထွက်သည်။ “ဖိအားလျှော့တာ သိလား .. သီတာ .. တခြားတွေးမနေနဲ့ .. အလုပ်အကြောင်းပဲတွေး .. ဒါအလုပ်ပဲ” အဆက်မပြတ်ပြောရင်း လီးထိပ်နှင့် အဖုတ်ဝကို စမ်းကာထောက်သည်။ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများက ပူနွေးနေပြီး အ၀လေးကမူ ခပ်စိုစိုဖြစ်နေသည်ကို ဦးကျော်ခေါင် သတိထားမိသည်။ နောက်ထပ်တစ်ချက် နှစ်ချက်လောက် ဒစ်ကိုဖိဖိထိုး၍ ဆွပေးလိုက်ပြီး တတိယတစ်ချက်တွင်တော့ အားနှင့်သုံးကာ ဖိသွင်းလိုက်သည်။ ပြစ်ခနဲ အသံက ခပ်ကျယ်ကျယ်ပေါ်ထွက်လာပြီး ဦးကျော်ခေါင် လီးထိပ်က စောက်ဖုတ်ဝထဲ မြုပ်ဝင်သွားသည်။ တင်းကျပ်နွေးထွေးသော အရသာကြောင့် ဦးကျော်ခေါင် အူးခနဲ ရေရွတ်မိပြီး ခေါင်းမော့တက်သည်။ “ဖက်ခ် . ကျပ်လှချည်လား … အားပါးပါး” စိတ်ဆန္ဒပြည့်ဝသွားယုံမက တင်းရင်းပြီးအိစက်နေသည့် အရသာကြောင့် ဦးကျော်ခေါင် အခိုက်ကြီးခိုက်ကာ အော်ညည်းသည်။ သီတာဆွေခါးအား ထိန်းကိုင်ပြီး လမ်းကြောင်းမှန်နေသည့် လီးအား ပို၍ တိုးဝင်အောင် ထပ်ဆောင့်သည်။ လီးက တင်းတင်းကျပ်ကျပ်နှင့် ထပ်ဝင်ပြန်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ သီတာဆွေသည်လည်းပဲ အောင့်မထားနိုင်တော့ပဲ နှုတ်မှ တရှီးရှီးနှင့် စတင်၍ ညည်းသည်။ လုံးပတ်တုတ်လှသည့် ဦးကျော်ခေါင်၏ လီးကြောင့် သူမအပေါက်လေးသည် ကိုဝင်းခိုင်ထက်စာလျှင် လမ်းပိုဖွင့်ပေးရရှာသည်။
ထိထိမိမိတော့ ရှိလှသည့်ဖြစ်ခြင်း ..။ “ကောင်းတယ် .. သီတာ … အရမ်းကောင်းတယ် .. မင်း အဖုတ်က စပယ်ရှယ်ကိုကောင်းတယ်” ကောင်းတယ်ဆိုသော စကားတွေ မိုးမွှန်အောင်ဆိုရင်း ဦးကျော်ခေါင် လီးကုန်အောင် ဆောင့်ထည့်လိုက်သည်။ အားပါးလှသည့် အချက်မို့ သီတာဆွေ သူမကိုယ်စားပွဲပေါ် လဲမကျသွားအောင် လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် တင်းတင်းတောင့်ခံထားရသည်။ လီးကြီးကတော့ အဖုတ်ထဲတွင် တစ်ချောင်းလုံး ကုန်အောင်မြုပ်နေပြီး တင်ပါးဖွေးဖွေးကြီး နှစ်ဖက်နှင့် ဦးကျော်ခေါင် ဆီးစပ်က ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မိတ်ဆက်သွားသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ .. ခါးသွယ်သွယ်လေးအား ထိန်းကာကိုင်ထားသော ဦးကျော်ခေါင်၏ လက်များကား ပင်တီလေး မလုံ့တလုံဖုံးနေသော တင်ပါးကြီးများပေါ်တွင် ရောက်ရှိနေသည်။ အီးလိုသာဆိုလျှင် ဂေါဂျက်စ်ဟု တင်စားခေါ်ဆိုရမည့် အကောင်းစား စံချိန်မှီ လုံးဝန်းပြည့်ဖြိုးသော တင်ပါးတစ်စုံကို စိတ်ကြိုက် နယ်ဖတ်၍ ဆုပ်ဆွဲသည်။ သီတာဆွေ အဖုတ်ထဲ မြုပ်ဝင်နေသော လီးကို လိုးဆောင့်မှုကိုလည်း တစ်ချက်လေးမှတောင် မရပ်။ သူ့ဟာကြီးကို ပတ်ပတ်ဆွဲနေသလို ဖြစ်သော နူးညံ့လှသည့် အတွင်းသားများ၏ အရသာကို ကောင်းကောင်းကြီး ခံစားရင်း ရှိရှိသမျှသော အားတွေကို သုံးကာ ဆောင့်သည်။ ဆီးခုံနှင့် သီတာဆွေ နောက်ပိုင်း ပြေးပြေးရိုက်သံသည် အခန်းထဲတွင် တဖတ်ဖတ်နှင့်ကို မြည်ဟီးနေတော့သည်။ အချိန်ကြာလှသည်နှင့်အမျှ သီတာဆွေ စောက်ဖုတ်က အရည်လိုက်ပြီး လိုးရတာ အဆင်ပြေချောမွေ့လာသည်။ သီတာဆွေ ကိုယ်တိုင်လည်း ရှက်တာကြောက်တာတွေ ရှိမနေတော့ဘဲ အန်ကယ်ဦးကျော်ခေါင် ဖိအားလျှော့ဖို့ကိစ္စကို တတ်နိုင်သလောက် ပြန်ကူညီလာသည်။
ဦးကျော်ခေါင် ဆောင့်ချက်တွေနှင့်အညီ သူမက နောက်ပြန်၍ တင်ပါးတွေကို တွန်းတွန်းပေးရာ နှစ်ဦးစလုံးအဖို့ ခံစားမှုဖီလင် မြင့်သထက်မြင့်လာအောင် ဖန်တီးပေးသလို ဖြစ်လာသည်။ သို့သော် ဦးကျော်ခေါင်တစ်ယောက် အလျင်လိုခြင်း လုံးဝမရှိ။ ကောင်းမွန်လှသော အရသာကြောင့် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြီးသွားမှာကို မလိုလားပါ။ လီးကို တစ်ချက်ဆောင့်သွင်းပြီး စောက်ဖုတ်ထဲမှ အနှုတ်တွင် အပြင်သို့ရောက်အောင် ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ ကောင်းခါစပြုနေပြီဖြစ်သော သီတာဆွေ စိတ်ထဲ ဟာခနဲတောင် ဖြစ်သည်။ ဘာများဖြစ်တာလိမ့်ဆိုပြီး ကုန်းထားရာမှ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လှည့်ကြည့်သည်။ သီတာဆွေ ထိုင်ခဲ့သော ထိုင်ခုံတွင် ဦးကျော်ခေါင် ၀င်ထိုင်လိုက်ရင်း သူမကို လက်ပြကာ လှမ်းခေါ်တာ တွေ့သည်။ “လာ .. သီတာ .. တစ်မျိုးစမ်းကြည့်အောင် .. အန်ကယ်ပေါ် တက်ခွလိုက် ..” ဦးကျော်ခေါင်အတွက် ကောင်းဖို့ကတော့ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွင်တော့ သီတာဆွေအား နှစ်ခါရှင်းပြစရာမလို။ ဘာဆိုလိုသည်မှန်း ချက်ချင်းသိပြီး ထိုင်နေသည့် သူ့အပေါ်တွင် တက်ခွသည်။ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်အနေအထားနှင့် တက်ခွပြီးနောက် ဦးကျော်ခေါင် မတ်နေအောင် ထိန်းကိုင်ထားသည့် လီးကို လက်ပြောင်း၍ပင် ယူလိုက်သည်။ တခြားနောက်ထပ် ဘာမှ တိုက်တွန်းစရာမလို။ အရည်တွေရွှဲရွှဲစိုနေပြီ ဖြစ်သော အဖုတ်ဝနှင့် ပြန်တေ့လိုက်ပြီး ချိန်သားကိုက်သည်တွင် တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်ကို အောက်သို့ ဖိချသည်။
“အိုး .. ဖက်ခ်” သီတာဆွေ၏ ထိုအပြုအမူကြောင့် ဦးကျော်ခေါင်၏ ရမ္မက်လှိုင်းသည် အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ ကူးပြောင်းသွားသည်။ လှပကျော့ရှင်းသော သီတာဆွေကိုယ်လုံးအထက်ပိုင်းကို ဖုံးကွယ်ထားသလို ဖြစ်နေသည့် အင်္ကျီအား ရင်ဘတ်ရှေ့ပိုင်းမှ စုကိုင်ပြီးဆွဲဖွင့်သည်။ ဖောက်ဖောက်ဆိုသော အသံတွေ မြည်ပြီး ကြယ်သီးတွေ အကုန်ပြုတ်ထွက်သည်။ ဘရာမပါသော ရင်နှစ်မွှာက အကာအကွယ်မဲ့စွာ ပေါ်ထွက်လာသည်တွင် ဦးကျော်ခေါင် လက်နှစ်ဖက်က တစ်လုံးခြင်းစီကို ဆုပ်စွဲလိုက်သည်။ ပြီးသည်နှင့် သူ့မျက်နှာအား ရင်ညွန့်ဖွေးဖွေးများဆီသို့ ထိုးအပ်လိုက်ပြီး လျှာကြီးကိုထုတ်ကာ စတင်လျက်တော့သည်။ “အမလေး .. အန်ကယ် … ရှီး .. ရှီး … အာ့ .. အား” “အိုး … ပြတ် … ပြွတ် … ပြွတ်” နို့သီးစူစူလေးနှစ်ခုအား တစ်ခုချင်းစီ ငုံ့စုပ်နေသည့် အချိန်တွင် သီတာဆွေတစ်ယောက် ဦးကျော်ခေါင် ပုခုံးအား အားပြုကာ အစွမ်းကုန်အပေါ်စီးမှ တက်ဆောင့်နေပြီဖြစ်သည်။ စိတ်တက်ကြွမှု အရှိန်က သူမထံတွင်လည်း မြင့်တက်နေပြီမို့ သီတာဆွေ၏ ဆောင့်ချက်တွေကလည်း အားပါနေသည်။ ဦးကျော်ခေါင်တောင် နို့သီးတွေကို လျှာနှင့် အကြာကြီး ငုံထားလို့မရ။ “အင်း .. ကောင်းတယ် .. သီတာရယ် .. သိပ်ကောင်းတယ် .. ဒီနည်းက ပါးစပ်အနံ့မရှိစေဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးပဲ ..” အသက်ကို ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက် ရှူရင်းမှ ဦးကျော်ခေါင် သီတာဆွေ စိတ်ရှင်းအောင် ထပ်မံ၍ရှင်းပြသည်။
မျက်လုံးလေးများ မှေးတေးတေးဖြစ်နေသော သီတာဆွေက ဦးကျော်ခေါင်စကားကို နားလည်ဟန်ဖြင့် ခေါင်းညိတ်ပြသည်။ ထိုရောအခါ ဦးကျော်ခေါင်က ပြုံးပြရင်း သီတာဆွေ မျက်နှာလေးအား လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ညှပ်ကိုင်သည်။ “သေချာအောင် အန်ကယ် သီတာ ပါးစပ်အနံ့ကို ခံလိုက်ဦးမယ်” ဘာမှန်းမသိခင်မှာပင် ဦးကျော်ခေါင် နှုတ်ခမ်းတွေက သူမနှုတ်ခမ်းများအား လာဖိကာ အတင်းစုပ်နမ်းခြင်း ခံရသည်။ သီတာဆွေ အွန်းခနဲ ညည်းသံထွက်ပြီး နှုတ်ခမ်းလွှာနှစ်ခု ခပ်ဟဟပွင့်ထွက်သွားသောအခါ သူ့လျှာကြီး အတင်းကို တွန်းထိုး၍ အထဲ ရောက်လာသည်။ သီတာဆွေ လုပ်မိလုပ်ရာအဖြစ် သူမလျှာလေးနှင့် ကျူးကျော်လာသူ လျှာကြီးကို ဆီးပတ်၍ တောင့်ခံထားလိုက်သည်။ သီတာဆွေတစ်ယောက် အောက်ဘက်ကို အာရုံမရောက်ဘဲ ပါးစပ်ထဲသို့ ရောက်လာသည့် ဦးကျော်ခေါင်လျှာနှင့် အလုပ်ရှုပ်နေခိုက်၊ ဦးကျော်ခေါင်က ဖင်ကြီးတွေကို ကော့ကော့တင့်ပြီး အောက်ကနေ အပြတ်လှုပ်ရှားသည်။ လေးငါးချက်လောက် ဇယ်ဆက်သလို ဆက်တိုက်ဆောင့်တင်လိုက်ပြီးသောအခါ သူ့မျက်လုံးထဲတွင် ပြာဝေသွားသလို ခံစားရပြီး နားထင်ကြောတွေ ပွင့်ထွက်သည်။ “ဖက်ခ် … ရှစ် !” နှုတ်ခမ်းချင်း အတင်းဖိကပ်ထားမှုက ကွာသွားပြီးနောက် ဦးကျော်ခေါင် အရုပ်ကြိုးပြတ်သည့်နှင့် ထိုင်ခုံနောက်သို့ လန်ကျသည်။ သီတာဆွေ စောက်ဖုတ်ထဲ အဆုံးထိတိုင်အောင် နစ်ဝင်နေသော လီးထိပ်ကမူ သုတ်ရည်ပူပူတွေကို မီးတောက်ပေါက်ကွဲသည့်အလား ပန်းထုတ်ပစ်သည်။သားအိမ်ဝတွင် နွေးခနဲနေအောင် ခံစားရလိုက်သည့် အတွေ့ကြောင့် သီတာဆွေ ယောင်ယမ်းပြီး အဖုတ်အတွင်းသားများကို ကျုံ့ မိသည်။ “ကောင်း .. ကောင်းတယ်” ဒီစကားလေး နှစ်လုံးကိုတောင် ဦးကျော်ခေါင် မနည်းရေရွတ်လိုက်ရသည်။ ကျန်တာတော့ ဘာမှ ထပ်ပြောမနေနိုင်တော့ဘဲ မျက်လုံးများကို မှိတ်ထားရင်း အသက်ကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင် ပြန်ရှူနေရသည်။
မျက်စိမှိတ်ရင်း ငြိမ်သက်သွားသည့် ဦးကျော်ခေါင်ကြောင့် သီတာဆွေ ဘာဆက်လုပ်ရမည်မသိ။ ဒီတစ်ခါ ဦးကျော်ခေါင် ဖိအားလျှော့ခြင်းသည် နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် အတော်ပင်ပန်းစေသည်သာ။ သီတာဆွေ ခနတာမျှ ဦးကျော်ခေါင် နည်းတူငြိမ်နေလိုက်ပြီး တအောင့်လောက်အကြာတွင် ဒီအတိုင်းချည်း မသင့်တော်ဘူးဟု အတွေးပေါက်ကာ ဦးကျော်ခေါင်အား ခွထားရာမှ ခြေထောက်ကြွ၍ အောက်ဆင်းလိုက်သည်။ သီတာဆွေ အလှုပ်တွင် ဦးကျော်ခေါင် မျက်လုံးများ ပြန်ပွင့်လာသည်။ “အဆင်ပြေသွားပြီ .. သီတာ ကျေးဇူးပဲ .. ပြန်နားချင်နားတော့ … အော် ဒါနဲ့ .. တလက်စထဲ အန်ကယ့်လီးမှာ ပေနေတာတွေ စင်သွားအောင် နဲနဲလျက်ပေးသွားဦး” ဟုတ်ပေသားပဲဟု သီတာဆွေ တွေးလိုက်ပြီး ထိုင်ခုံအောက်သို့ လျှော့ဆင်းကာ နှစ်ဦးသားအရည်များ ပေနေသော လိင်တန်ကို လျှာနှင့်လျက်ပေးလိုက်သည်။ ပါးစပ်အနံ့ မနံစေချင်လို့ စောက်ဖုတ်ကို သုံးလိုက်ရသည်ဆိုသော အချက်ကိုမူ သီတာဆွေ ထုံးစံအတိုင်း ယောင်လို့တောင် မတွေးမိခဲ့ပါ။ ဦးကျော်ခေါင်တစ်ယောက်ကတော့ သီတာဆွေ၏ လျှာအရသာလေးကို ခံစားရင်း စိတ်ထဲအပျော်ကြီး ပျော်နေသည်။ ကျမ်းစာများထဲတွင် သုံးနှုန်းသော ကောင်းကင်ဘုံဆိုတာ ဘာမှန်းမသိပေမယ့် အခုလောလောဆယ်တွင် သူ့ကိုယ်သူ ထိုနေရာသို့ ရောက်နေသလို ခံစားနေရသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဇာတ်လမ်းအစက ဆိုခဲ့သလို ဦးကျော်ခေါင်တစ်ယောက် အသက်ကြီးမှ မုတ်ဆိတ်ပျားလာစွဲသမျိုး အဖြစ်အပျက်နှင့် ကြုံတွေ့ရတာ ဖြစ်သည်။ ပျားတောင်မှ သီတာဆွေဆိုသော ပျားသည် ရိုးရိုးပျား မဟုတ် .. ပျားဘုရင်မဟု ဆိုရမည့် တကယ့်အမိုက်စားပင်။ တကယ်ဆိုလျှင် သီတာဆွေသည် ဦးကျော်ခေါင်အတွက်တော့ ကျနော့်ရဲ့ ပျားဘုရင်မလေးဟု တင်စားခေါ်ရမည့်သူသာ ဖြစ်တော့လေသည်။